Proverb 68 Aina ity, hoy Rainimanonja . [Rinara 1974]
Proverb 366 Ampinga ravin-tsaonjo : voafina ihany ny tarehy , fa tsy voafefy ny aina . [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverb 436 Andevolahin' ny hariana ny aina . [Veyrières 1913]
Proverb 523 Angady tokana ny aina : raha tapaka tsy misy hasolo azy. [Cousins 1871 #228, Nicol 1935 #464]
Proverb 664 Arahaba tsy maty fo aman' aina . [Veyrières 1913]
Proverb 971 Aza manao an-tenin’ aina . [Houlder 1895 #421, Cousins 1871 #419]
Proverb 1452 Aza mitoe-mamokaiky , fa ataovy izay tratry ny aina . [Cousins 1871 #662]
Proverb 1454 Aza mitomany handatsaka aina , toa bala. [Houlder 1895 #522]
Proverb 1527 Aza tanora be sondrotr' aina , fandrao ho faty alohan' ny marary . [Veyrières 1913 #2784]
Proverb 1572 Babin-katsaka an-tany mena , ka ny baby roa tsy misy fa raha mahatana ny aina dia zara . [Rinara 1974 #841]
Proverb 1579 Balan--tsakaiza ka anivon' ny aina indrindra. [Rinara 1974 #844]
Proverb 1858 Efa an-dohariana ny aina . [Veyrières 1913 #2851]
Proverb 2040 Fary lanim-boana , mitsangan-tsy amin' aina . [Samson 1965 #F16]
Proverb 2143 Fofo-nahandro ny aina , ka tsy hita izay ahalevonany . [Veyrières 1913 #2761, Cousins 1871 #977]
Proverb 2144 Fofo-nahandro ny aina : raha sokafana , dia lasa. [Veyrières 1913 #2762, Cousins 1871 #978]
Proverb 2351 Henan' ny mpitsoka miozika : ataovy tsara zara , fa vidim-pofon' aina . [Veyrières 1913 #4491, Cousins 1871 #1048]
Proverb 2443 Hoatry ny tehina an-tanan' ny mpihaingo , ka sady haingo no tohan' aina . [Veyrières 1913 #2430]
Proverb 2636 Izay andro ahoriana , tsaroan' ny aina . [Rinara 1974]
Proverb 2651 Izay iray vatsy iray aina . [Cousins 1871 #1181, Nicol 1935 #407]
Proverb 2653 Izay kely fihinana kamo fila aina . [Cousins 1871 #1183]
Proverb 2661 Izay maharary no itoeran' ny aina . [Rajemisa 1985]
Proverb 2685 Izay manoro lala -mahitsy , mamindra aina . [Veyrières 1913 #6503, Rinara 1974]
Izay manoro lalana mahitsy , mamindra aina . [Houlder 1895 #1597]
Proverb 2876 Kely tsaroan' ny aina ohatra ny voan' ny somisika . [Rinara 1974]
Proverb 2893 Kibobo voafandrika ka ny mandrimandry no ahazoana aina . [Rinara 1974]
Proverb 2968 Lahiantitra mitehin-kiho : tsy haingo fa tohan' aina . [Rinara 1974 #1676, Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverb 3458 Manafaingana tena toy ny marary be tsy homan-kanina . [Veyrières 1913 #2800]
Proverb 3579 Manao mosalahy ny aina . [Veyrières 1913 #6295]
Proverb 3580 Manao ny ain- tsy ho zavatra. [Veyrières 1913 #6298]
Proverb 3620 Manao very tena ; mahafoy ny aina . [Veyrières 1913 #6297]
Proverb 3622 Manao vy very ny aina , ka manao jirik' aina mitady izay hafatesana . [Veyrières 1913 #6299]
Proverb 3740 Mandrodona am-pasina : very ton’ aina . [Samson 1965 #M52]
Proverb 3946 Maty an-tsoron' aina . [Veyrières 1913 #2871]
Proverb 4016 Menaky ny aina . [Veyrières 1913 #978]
Proverb 4035 Miala aina hanadio ny sasany tahaka ny savony . [Rinara 1974 #2241]
Proverb 4138 mifanena an-kentona , ka samy miaro ny ainy ihany. [Houlder 1895 #1172]
Proverb 4170 Mihazakazaka ambany farafara ka tsy misy hanam-parana ny aina . [Rinara 1974 #2315, Cousins 1871 #1767]
Proverb 4378 Mitari-bato tsy mihoraka : very ny androatokon' aina . [Rajemisa 1985]
Proverb 4389 Mitehin-kiho am-piakarana , ka sady haingo no tohan' aina . [Rinara 1974 #2448]
Proverb 4582 Mpamosavy mitravoka : manary fanahy ny tompon’ aina . [Samson 1965 #M135]
Proverb 4687 Na dia kely aza, tsarotsaroan' ny aina , hoatry ny fahenim-bary fahavaratra . [Veyrières 1913 #2767]
Proverb 4706 Nahoana hianao no manara-binanto ? ka hoy izy : " ny aiko aza lasany " . [Veyrières 1913 #1456, Rinara 1974 #2660, Cousins 1871 #2025]
Proverb 4855 Ny aina aloka aman--javona : mihelina dia lasa . [Houlder 1895 #2093]
Proverb 4856 Ny aina hoatry ny fanjozoro : ka izay mahavatra mampando no manana ny mafy . [Veyrières 1913 #2768]
Proverb 4857 Ny aina raha lasa tsy mba miverina . [Rinara 1974]
Proverb 4858 Ny aina Ramangatahina , ny vola Ramangatadiavina . [Rinara 1974 #182]
Proverb 4859 Ny aina toy ny tavim-bilany , ka tsy fantatra izay hahavakiany , na ho antoandro na ho alina . [Houlder 1895 #2092, Veyrières 1913 #2769]
Proverb 4861 Ny aina tsy ananam-piry . [Veyrières 1913 #2891]
Proverb 4862 Ny aina tsy mba bozaka , ka raha maina ny lohany dia maniry indray ny fakany . [Rinara 1974 #2835]
Proverb 4863 Ny aina tsy mba landihazo : raha antoandro ny andro mibo-haka. [Veyrières 1913 #2771, Cousins 1871 #2129]
Proverb 4945 Ny andriana tsy mba itsitsiana ny aina . [Veyrières 1913 #379]
Proverb 5110 Ny fitia tsy hanjary ve no andritana aina ? [Rinara 1974 #3005]
Proverb 5607 Nitondra ny tsy araka ny aina , hoatry ny moka voateha-tsofina . [Veyrières 1913 #2731]
Proverb 5719 Ny vola Ramangatsimahatola , ny aina Ramangatsiatakalo zavatra. [Rinara 1974 #3362]
Proverb 5720 Ny vola tahaka ny volon' orona : tsaroan' ny aina raha anongotana . [Rinara 1974 #214]
Proverb 5844 Omby mahia be tandroka ka mitondra ny tsy eran' ny aina . [Rajemisa 1985]
Proverb 6053 Raha lany ny harena , mihatra amin' ny aina . [Veyrières 1913 #2553]
Proverb 6214 Rakotr’ aina , rako-paty . [Samson 1965 #R16]
Proverb 6271 Ranomaso tsy mahatana aina . [Cousins 1871 #2758, Nicol 1935 #164]
Proverb 6585 Singam-bolo tsy mahafehy faty. [Houlder 1895 #2104, Nicol 1935 #168]
Proverb 6666 Sombin' aina . [Veyrières 1913 #1002]
Proverb 6917 Taon-jezika an-kady ka aina no fetra . [Veyrières 1913 #3752, Houlder 1895, Rinara 1974]
Proverb 6920 Tao-zava-drafozana : avo roa toko ny aina . [Veyrières 1913 #1477]
Proverb 7000 Tenin’ aina , tahaka ny salakan’ Atsimon-drova . [Cousins 1871 #3078]
Proverb 7299 Torimason- jamba : aina no fetra . [Cousins 1871 #3151, Nicol 1935 #173]
Proverb 7490 Tsy jabany ny ainy . [Veyrières 1913 #6327]
Proverb 7495 Tsikin' olon-tiana , ka sady toky no vahatry ny aina . [Rinara 1974]
Proverb 7604 Tsy mba ny miray donak' afo , fa ny miray ombon' aina . [Rinara 1974 #4557]
Proverb 7853 Tsintsina mitondra sompanga : ny taona dia zina , fa ny kibo hasiana no tsy misy. [Cousins 1871 #3320]
Proverb 7912 Tsitsio ny harena , fa tsy mifamotoana ny ainao sy ny faharetany . [Veyrières 1913 #2412]
Proverb 8144 Veloma fo aman' aina . [Veyrières 1913 #4178]
Proverb 8177 Very vahatry ny aina , tahaka ny maty zanaka lahi-matoa . [Rinara 1974 #4947]
Proverb 8220 Vitsika nahazo valala : tonga ny entana , fa ny vava no tsy omby . [Houlder 1895 #637]
Proverb 8246 Voalavo mihazakazaka an-kentona : tsimbino ny aina , fa lavitra hianjerana . [Veyrières 1913 #6262, Cousins 1871 #3693]
Proverb 8310 Volon-katsaka misakan-tadio , ka manohana ny tsy eran' ny ainy . [Houlder 1895 #910]